Umkhuleko wokulawula umyeni. ? [Ukubuyisa umshado wakho]
Umkhuleko wokhulisa umyeniUkugcina ukuthula ekhaya kuhlala kuwumsebenzi onzima futhi kwesinye isikhathi kudinga usizo lwaphezulu. Umkhuleko wokhulisa umyeni ulethe ukubekezela okwengeziwe, ukuthula nokuzimela othandweni lwakho.
Umuntu ngamunye usabela ngendlela ehlukile ezimweni ezinzima empilweni. Uma umyeni wakho eba nezingcindezi eziningi emsebenzini noma izinto zingahambi ngendlela abehlele ngayo, yisho lo mthandazo ukuzehlisa umyeni onovalo.
Kujwayelekile kakhulu ukuthi konke ukucindezelwa kwezikhathi eziyinkimbinkimbi kubuyela esimeni somndeni. Uma umlingani wakho ephethwe ngokweqile, umthandazo wokuthambisa umyeni othukuthele futhi ophuthumayo ufikile nje ngesikhathi sakho.
Ngokukholwa kuzokwazi ukubuyisela ukuvumelana ekhaya futhi umshado wakho uzoba mnandi kakhudlwana.
1 Umkhuleko wokhulisa umyeni
2 Umkhuleko wokonakalisa umyeni ophuthumayo
3 Umkhuleko weSanta Amanso wokulawula umyeni
4 Umkhuleko kumyeni wasekhaya - uSanta Tame
5 Umkhuleko kumyeni wasekhaya - uSanta Catherine
6 Ungawuthanda kanjani umthandazo ukuze uthambise umyeni wakhe
“Nkosi, ngifaka ubukhona bakho njengamanje. INkosi inkulu, INkosi inamandla, INkosi imunye. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho futhi wedwa ongasiza ekwenzeni umshado wami ube yimpumelelo. Siza umyeni wami ukuba abe yindoda engcono, abe nokuzola, angiphathe ngenhlonipho ethe xaxa, enze kangcono kimi nezingane zethu. Imfundisa ukuthi angathuthuka kanjani njengomyeni, njengobaba, njengenhloko yomndeni. Ngifuna umshado wami uphumelele, kepha lobu bunzima buyakhungathekisa ubuhlobo bethu. Futhi unginike ukuhlakanipha ukuze ngikwazi ukubhekana nomyeni wami ngenhloso yokubona isimo sami sengqondo futhi ngiphefumulelwe ukuba ngithuthukise, ngibe nokuzola, ngithukuthele, ngithande nabangane bami abaningi. Ngiyabonga kusengaphambili ngesibusiso engizosithola. Futhi ngiyakucela futhi ukuthi ungifundise ukuthi ngenza kanjani ngendlela efanele naye ukuze ngiguqule indlela yakhe. Amen.
Umkhuleko wokonakalisa umyeni ophuthumayo
“Hheyi, bangcwele abanamandla!
Ukuthi ukwazi ukuqonda ukukhala okuvela enhliziyweni yami.
Lokho kungaluzwa uthando engiluzwayo (ngokwesibonelo, igama lomuntu othandekayo).
Ngiyakuncenga, ungisize nginqobe (yisho igama lomuntu othandekayo) nakanjani, ngoba (usho okwenzekayo empilweni yakho) futhi uzizwe sengathi ngingakulahla unomphela!
Ngixelele, thambisa inhliziyo yakho ebukeka njengetshe!
Uma ngisho nembongolo eyisilima ikhethiwe nguwe, khona-ke ngiyazi ukuthi isicelo sami siyenzeka. Amen
Umkhuleko weSanta Amanso wokulawula umyeni
Umkhuleko kumyeni wasekhaya - uSt.Mark
«(Yisho lapha igama lomuntu ofuna ukumthulisa),
Sengathi uSmart Mark angakuthoba futhi udambise le ntukuthelo nentukuthelo obukade uyiphatha ngaphakathi kwakho, okwenza umoya wakho nomphefumulo wakho ujabule.
(Isho lapha igama lomuntu ofuna ukwehlisa umoya),
USanta Mark udonse izingonyamazane, izinyoka nezidalwa ezingenakucatshangwa futhi ngamandla akhe futhi ungamenza amphathe, aphathe intukuthelo, ukufutheka kwakhe nazo zonke izinzwa zakhe abelokhu eziphethe.
ISan Marcos ingathinta inhliziyo yakho, ikwenze ithambe, ibe lula futhi ibe nemizwa ethe xaxa.
Izothinta umphefumulo wakho futhi iwukhulule kubo bonke ukufutheka nakho konke ukuvukela okubandakanya.
Kuzokwenza umzimba wakho ube lula, ukhululeke futhi uthule.
USt. Marku uzosebenzisa wonke amandla akhe ukuthoba wena futhi ususe yonke intukuthelo owawunayo selokhu wazalwa. Kuzosusa lolu phawu olwesabekayo ukuze ube ngumuntu ohlukile, umuntu ongcono futhi onokuthula.
(Isho igama lomuntu ofuna ukwehlisa umoya),
Ngiyafunga kuJesu Kristu ukuthi wathwala isiphambano ngokuhlupheka okukhulu kangangokuba uyokwenama futhi aphile futhi, ukuthi uzoba ngumuntu ohlukile kusuka manje nokuthi ngeke azizwe enovalo njengangaphambili.
Yonke le ntukuthelo uzoyikhipha unomphela futhi uzoba ngumuntu ongcono nozolile.
Umkhuleko kumyeni wasekhaya - uSanta Tame
«(Yisho igama lendoda ethukile),
Kwangathi uMe Saint Meek angakumaka, kwangathi uSanta Meek angakuphoxa futhi kwangathi uJesu Kristu angakuthambisa.
Kwangathi i-Saint Tame ingasusa lokhu ukufutheka nokufutheka kwesinye isikhathi okukhulula abantu abangalungile.
(Isho igama lendoda enovalo),
Kwangathi uSt. Meek angabamba lo msindo osheshayo awususe. Bopha zonke izinkinga zakho bese ulungisa ngayo yonke intukuthelo ehambisana nazo.
Kwangathi i-Tame enamandla enamandla neqondayo ingaphatha ukususa lo mbala omubi odabukisa umndeni wakho futhi okuzwayo uphoxekile.
I-Saint Tame izokuphilisa, iqede yonke le ntukuthelo, konke lokhu kusizi futhi ikwenze ube namandla okubhekana nazo zonke izinkinga zakho ngaphandle kokuthukuthela futhi uthukuthele ngaphandle kwesizathu.
U-Saint Tame, uphulukisa konke ukuthukuthela komyeni wami, kumlimaze ezikhathini ezinzima kakhulu nasempilweni yakhe.
Siza umphefumulo wakho, umuntu nobuntu bakho ukuthi uguquguquke ngokwengeziwe futhi ubekezelele izinto ezimbi ezizokuza.
USanta Tame uzokuthambisa, akuthobe futhi asuse zonke izinto ezimbi onazo.
Umkhuleko kumyeni wasekhaya - uSanta Catherine
“USanta Catarina, wena ohlupheke kakhulu empilweni yakho, wena osudlule kulokho okungekho muntu ofanele ukubhekana nakho, ngicela ungibheke ngaphakathi kanye nomndeni wami futhi ungisize ngomyeni wami (yisho igama lomyeni eliphelele).
Unovalo kakhulu, uthukuthele kakhulu futhi unolaka, futhi ngiyazi ukuthi angikwazi ukujabula.
Ngihlose ukukunika ithuba, futhi okukodwa, ngakho-ke ngicela ungisize ngithule.
Thula umyeni wami Santa Catarina, thambisa inhliziyo yakhe, wehlise imicabango yakhe.
Kukusiza ukubhekana nezikhathi eziyinkimbinkimbi kakhulu yempilo yakho, ikakhulukazi ezikhathazayo kakhulu, futhi kuvimbela izinzwa zakho ukuqhuma nsuku zonke, ubusuku nemini yonke.
Inikeza ukuzola enhliziyweni yakho, ikunikeze ukukhululeka ngokwengqondo nangokomzwelo futhi ifiphele yonke imicabango emibi ekhanda lakho ekwenza ukhathazeke.
Ngisize ngalolu suku olubi kakhulu iSanta Catarina.
Ngisize, umndeni wami nomyeni wami ukuze ekugcineni sijabule ngempela.
Ngikholelwa kuwe Santa Catarina. Amen.
Ungawuthanda kanjani umthandazo ukuze uthambise umyeni wakhe
Imikhuleko yasekhaya eyethulwa lapha ingathandazwa ndawonye noma ngokwahlukana. Ngokubakhuleka, uzokwehlisa umoya ngenkathi ecela usizo lokuqinisekisa umyeni wakhe.
Uma ufuna ukusho lemikhuleko kosanta abehlukene, akunankinga nokuthi. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kuzonyusa amathuba okugcwaliswa kwesicelo sakho.
Umkhuleko wokwelapha umyeni ungenziwa zonke izinsuku. Ngokufanelekile, kufanele uyifake ngesikhathi esithile esimisweni sakho sokukhumbula njalo ukuthandaza. Lapho uthandaza kakhulu, kulapho ukuxhumana kwakho noNkulunkulu kukhula khona.
Lapho uthandazela ukonakalisa umyeni, kufanele ube nokholo olukhulu futhi ukholelwe ukuthi iNkosi izokwenza isinyathelo ukuze umlingani wakho azole futhi athule, kungakhathalekile ukuthi yisiphi isimo sakho.
Kepha qaphela: Umusho uyasebenza kuphela uma izinhloso zawo zilungile. Uma ufuna ukwehlisa umyeni wakho ukwenza umshado wakho ube yimpumelelo, futhi abe yindoda engcono, lapho-ke usesezingeni elifanele.
Kepha uma ufuna ukwehlisa umyeni wakho ukuba abe inceku yakhe, yazi ukuthi lo mthandazo ngeke usebenze nakancane. Umkhuleko wokwazisa umyeni usebenza kuphela uma inhloso enhliziyweni yakhe imnandi.
Kujabulele ukufaka lomkhuleko enkambisweni yakho futhi ugeze ividiyo elandelayo ezoletha ukuthula emndenini wakho.
Funda futhi umkhuleko wokubuyisela umshado.